Ama-cosmetologists anamava athi indawo ye-acne ebusweni ikwazi ukufumana izigqibo ngokubhekiselele kwiimeko zempilo yabantu. Ngokuqinisekileyo, ngamanye amaxesha izibhamu zivela ngenxa yokunyamekela okungafanelekanga, ukusetyenziswa kwezidakamizwa ezingafanelekiyo, ngokuqhelekileyo ukuxhamla kunokunxulumana nokutya okanye nayiphi na enye imfutho, kodwa kwiimeko ezininzi ulusu luchaphazeleka ngenxa yobungakanani naziphi na izifo.
Ulusu lomntu lukhulu kunommandla, onoxanduva lokubhekiselele kwi-thermoregulation, kodwa kwakhona luphawu oluhle kakhulu apho umntu angakugweba khona kwiingxaki zempilo. Ngexesha elifanayo, isikhumba sinokuboniswa ngophawu lwezinto ezinzulu kunye neengxaki ezinzulu, ukususela kwi-vitamins yokulandeleka kwintsholongwane kunye nokuphelisa, kunye nokuphela kweengxaki ezinjalo, ezingenakukunyanzelwa, ezifana nokungalingani kwe-hormone, ukungalingani komsebenzi wezitho zangaphakathi.
Ngexesha elifanayo, ubugcisa bokubakho ukuxilongwa kwindlela yokujonga kwangaphandle kwesikhumba akuyona eyona ndlela yinkqubo yezona zinto zanamhlanje, kuba abagqirha baseTshayina basebenzise ingqalelo yokuba inqabileyo ihlanganiswe iinqabileyo, iminyango, ikhula ngokuqala kuzo zonke iindawo apho izitho zangaphakathi zixelwe apho umsebenzi Ngaphezu koko, ukuba ufumane ukuxilongwa, ucingisise ngesikhumba, unokwenza okungcono kunokuba ugqirha ofanelekileyo onomshini we-ultrasound kunye nazo zonke iintlobo ezintsha iindlela eziphambili zophando lwebhubhoratri kunye nokuxilongwa.
Ngaba ixhamla ebusweni ngokukhawuleza?
Enye yezona ntlobo eziqhelekileyo ze-acne yinto yokutshisa, esoloko ivela ngexesha lokukhula kwaye inxulumene nezinguqu kwimvelaphi ye-hormonal. Ukuba impilo ilungile, kwiminyaka eyi-18-20 usebenziso oluqhelekileyo lweentlanzi ezinqabileyo luyasungulwa kwaye i-rashes iyanyamalala ngaphandle kwongenelelo lwangaphandle.
Umzuzu wesibini obalulekileyo ebomini ngowama-40-45 ubudala. Njengoko ucinga ukuba, ukubonakala kwe-acne ngeli xesha kudibaniswa neenguqu ezifanayo ze-hormonal ezenzeka emzimbeni wawo onke amabhinqa. I-Dermatology cosmetologists ukuchaza le nkinga kwaze kwafika nekota yabo "ukukhwabanisa kwamadoda". Kuyadabukisayo, izibonda zolu hlobo zibonakala ngokuxhomekeke kwinqanaba le-saturation yomzimba kunye ne-hormone yesini esetyhini, kwaye kaninzi kubonakala ebusweni ekupheleni komjikelezo ngamnye.
I-Acne kunye nezinye izifo ezihlobene
Njengoko uyazi, iyeza elisemthethweni lisencineni lithelekiswa nombuso ongaxhaswanga, ngoko ke akunako ukunika impendulo ngokuthe ngqo kwimibuzo yezifo ezibhekiselwe kuyo kwesikhumba senye indawo yesikhumba. Enyanisweni, kungafanelekile ukuhlawula umvuzo kwi: oogqirha bafunda le ngxaki kwaye bazama ukufumana ubudlelwane.
Ngoko, akungabazeki ukuba amabala e-pigmentation ayenziwa ebusweni kwaye ayinakukwazi ukulungiswa, zikho iingxaki zesibindi kunye nokungasebenzi kwezi-ovari.
I-acne yabonakala ngokukhawuleza ebusweni bakhe? Kule meko, kubalulekile ukujonga umsebenzi wegastrointestinal tract, i-pancreas, isibindi, ngelizwi, zonke izitho kunye neenkqubo ezijongene nometabolism emzimbeni.
Ukusuka apha unokwenza isigqibo esicacileyo: ukuba sele usuqedile isikolo, kwaye ubudala bakho bubudala, xa ubonakala udibanisa kuyinqweneleka ukuba ungayi kwi-cosmetologist. Eyona ndlela ingcono kwimeko leyo iya kuba yinkqubo yesigqirha sesithili kunye nesicelo sokubhalela isikhokelo sokubhalwa kwendalo yonke.
Ukongeza kwimeko yokuba izifo zethu zenyama zibonakaliswa kwesikhumba, indlela yokuphila esiyikhokelayo kunye nokutya kukuchaphazela. Iimpumpo ezabonakala kumaphiko empumlo nasezihlathini zithi ingxaki kufuneka ikhangelwe emathunjini amancinci, kwaye ukuqhuma kwiitempile nasebunzini kubungqina bokwehla kwesisu nasesibindi.
Ukuba uhlala ukhononda ngemilomo ephahliweyo, kwaye i-nalbu ibonisa ngokuphindaphindiweyo imivumba engaphantsi, kuyafaneleka ukutshekisha intumbu kwisifundo sobukho be-slags kuyo kunye neengxaki ze-microflora.
Iintlanzi ezibonakalayo ebunzini, kodwa ezikufutshane kunye neendlela zokukhula kweenwele, zibonisa ukuba i-gallbladder ayilungile kunye ne-prostate gland.
Kodwa izifo zesimo se-endocrine, oko kukuthi, i-thyroid gland, i-epiphysis, i-pituitary gland, i-adrenal glands, iboniswa ngamaphuphu avela kwi-nasda, nentamo.
Qaphela ukuba iimpawu ezixinzezelayo zithumela isikhumba, unakho ngokunciphisa amancinci, ukomisa ngokweqile kwesikhumba. Kodwa ukuba isibindi singalawulekiyo nomthwalo, i-acne kunye namabala e-pigmentation avela ebunzini okanye ekhaleni.
Unomangalo omkhulu ukuba ukuhlaliswa kweengqungquthela kunzima ukucacisa: i-acne ibonakala ebunzini, ngoko kwi-chin, emva kweehlathini okanye emilenzeni, ngamanye amaxesha ngokubhekiselele kubuso bonke. Ukuphindaphinda kwimeko yokubonakala kwenyoni ayikho. Oku kubonisa ukuba kubalulekile ubuncinane amaxesha ambalwa ukunikela ngegazi ukuze ufumane imvelaphi ye-hormonal, kwaye ulungelelanise ukutya kwakho kwansuku zonke.
Ngokumalunga neentlungu zingagwetywa ngamagqabi avuyiweyo, amaninzi ahlala ebonwa kusasa. Kodwa ukuba uyaphawula ukuba i-edema ihlala kwindawo yangaphandle kwamehlo, kunengqiqo ukujonga indlela inkqubo ye-cardiovascular system isebenza ngayo. Iingxaki ngentliziyo kunye nemithambo yegazi ziboniswa ngokubuyiswa kwakhona, intonga evuvukileyo yempumlo.
Iingxaki kwiindawo zesini zobhinqa zixhomekeke ebusweni njengento yokugqithisa. Kwakhona kunengqiqo ukudibanisa nomzimba we-gynecologist ofanelekileyo ukuba ulusu elukhunjini lubonakala lubukhali ngaphezu kobuso bonke. Ukutshintshwa kwangaphandle kungokuba bubungqina bomsindo ongapheliyo we-urrogenital system.
Njengoko sele uqondayo, i-acne akufanele ithathwa njengento eqhelekileyo. Xa ibonakala, kucetyiswa ukuba udibane nogqirha uze uviwo oluqhelekileyo oluya kunceda ukuchonga iingxaki ezifihliweyo kunye nokuphatha izifo kwinqanaba lokuqala.
Umkhangeli Wefashini # 1: Ukubukeka kweMhlophe kunye noMnyama
Imisebenzi yemidlalo: into ephambili ukuqala ngokuchanekileyo
Ukuncoma ngokunyanisekileyo ngoFebruwari 23, amadoda abathandekayo, abahlobo kunye nabalingane - ngeesms kunye nokuhlekisa, kwiingoma ezihlekisayo, i-prose emfutshane esemthethweni - Ukungavuyiswa ngokungaqhelekanga ngabahlobo kunye nabaziwayo ngokuhlonipha ngoFebruwari 23
Indlela yokusabela ngokunyaniseka nokungahambi kakubi?
Isikhathi sePrint for replenishment
Ingozi yangempela ebomini kunye nempilo yabantwana
Kuphi ukuchitha ikhefu ehlobo kunye nomntwana